Taxanaha 370 Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Taxanaha 370 Dragon® Dredge
Ellicott Dredges waa mid ka mid ah shirkadaha soo saaraya qashinka Mareykanka iyo adduunka oo dhan. Taxanaheena 370 Dragon® dredge waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna guusha yar jeexan jeexan jeexan warshadaha. Macaamiilku wuxuu u dhexeeyaa shirkado cusub, oo markii ugu horeysay ka howlgala meelaha fogfog ee adduunka, qandaraasleyaasha guud, milkiileyaasha khaaska ah, iyo hay'adaha dowladda ee Mareykanka oo dhan.
Moodelkan waxaa badanaa loo adeegsadaa codsiyo badan oo ay ka mid yihiin qodidda wabiga, haro-haynta, dayactirka marinnada iyo marinnada marinnada, dayactirka kanaalka, ilaalinta xeebta & xeebta iyo dib u soo celinta meelaheeda dhoobada iyo dhirta qoyan.
370 HALIS UGU DANBEEYA
Naqshad fudud ayaa ka dhigaysa meel ku habboon oo loogu talagalay milkiilayaasha markii ugu horreysay.
Si aad u qallafsan oo la isku halleyn karo oo loo yaqaan 'cutter nuugid dredge' ayaa bixisa wakhti yar oo ugu yaraan ah dayactirka joogtada ah ee muhiimka ah
Nidaamka xakamaynta, mishiinka, iyo qaybaha farsamada ayaa si cad loogu xushay si loogu isticmaalo jawiga badda ee adag.
Jalaado badan - oo loo adeegsado macdanta ciidda, qodidda marinnada biyaha ee yar yar, kanaallada, iyo marinada
Cabbirka siidaynta: 12 ″ x 10 ″ (300 mm x 250 mm)
Cilmiga Matarka Heerka C.93: 416 HP (310 kW)
Awoodda Quwada Xoogga: 40 HP (30 kW)
Saddex nooc oo lagu kala xulan karo kuna saleysan heerka ugu hooseeya ee qoto dheer ee loo baahan yahay: 20 ′ (6 m), 33 ′ (10 m), ama 42'-50 '(12.8 m-15.2 m)
Wiishka jibbada ah ee 'Stern jib crane' ee tuubada dheecaanku ka baxo
Kuleyliyaha qolka kululeeyaha iyo qaboojiyaha
Xarkaha xargaha xargaha iyo barroosinka
Fursado dheeraad ah ayaa sidoo kale la heli karaa markii la codsado